Ikhodi yakwaGoogle ifile, iziphi ezinye izindlela ezingcono kakhulu? | Kusuka kuLinux
Ikhodi yakwaGoogle ifile, iziphi ezinye izindlela ezingcono kakhulu?
U-Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Okunye
Ezimweni ezingalindelekile, -Google umemezele ukuthi ngoJanuwari 26, 2016, I-Google Code kuzodlula, lokho kulula. Iphrojekthi eye yazama ukuncintisana nemidondoshiya efana GitHub ngokusobala ayilondolozeki futhi kancane kancane imikhawulo izobonakala ivala kancane kancane.
Ushintsho lokuqala abasebenzisi abaningi abazolubona (futhi abanye sebevele bebona kulokhu engikuqondayo) ukuthi amaphrojekthi amasha ngeke esakwazi ukulayishwa, nokuthi okuqukethwe okubanjelwe kuze kube manje kuzotholakala ngemodi yokufunda kuphela.
Njengamanje eCuba besikujabulela ukuvulwa kwezinsizakalo eziningi zeGoogle, banqume ukuvala iGoogle Code, noma kunjalo, sisenezinye izindlela ezimbalwa. Ake sibone ezinye zazo.
7 I-GNU Savannah
Mhlawumbe uhlelo lwe UKWAKHA eyaziwa kakhulu futhi ithandwa, kepha hhayi okungcono kakhulu ngombono wami ngezici zayo ezinomkhawulo. Okubi kakhulu yiGithub ukuthi ukuze sibe nezinqolobane eziyimfihlo kumele sikhokhe, noma kunjalo amanani akuzona ezehaba kwabaningi. Ngakolunye uhlangothi, isinikeza isikhala esingu-1Gb sephrojekthi ngayinye, kanye ne-Wiki kanye newebhusayithi ngayinye yazo.
Enye inzuzo esisinikezwa yiGitHub yimidwebo yokubona ukuthi abathuthukisi basebenza kanjani ezinqolobaneni zabo nasemafolokheni amaphrojekthi, ukusebenza sengathi kuyinethiwekhi yokuxhumana nabantu, futhi kuyithuluzi elihle kakhulu lomsebenzi wokubambisana. Sebenzisa uhlaka I-Ruby ku-Rails.
Kuwo wonke amasayithi okwenziwa lokhu intandokazi yami futhi kubhalwe kuwo Python. I ukusebenza nokuthuthuka IBitbucket miningi, kepha inezici ezimbili ezixazulule impilo yami:
Singakwenza Phusha y Donsa ngaphezulu kwama-https (kulabo abanamachweba we-git avaliwe kuma-ISP abo).
Singaba nezinqolobane zomphakathi, ezizimele nezabiwe ngaphandle kokukhokha ngisho nesenti, noma IGITHI o Mercurial.
Impela, inikela nangezinhlelo zebhizinisi namanye amathuluzi we Atlassian (inkampani engemuva kwephrojekthi, nabanye abafana ne-HipChat) ukwakha ipulatifomu yokusebenza ngokubambisana ephelele.
Enye insizakalo enhle esanda kuthengwa ngu- I-GitLab ngakho-ke izoyeka ukusebenza ngoMeyi walo nyaka.
Noma kunjalo, kunenkinga yokuthi uma iphrojekthi noma indawo yokugcina ingaphezu kwama-500 MB / ngenyanga, noma idlula ukusetshenziswa okujwayelekile komkhawulokudonsa wabanye abasebenzisi noma amaklayenti, i-Gitorious.org inelungelo lokucima noma ukukhawulela i-akhawunti, iphrojekthi, noma ikhosombe kuze kube umnikazi waleyo akhawunti anganciphisa ukusetshenziswa komkhawulokudonsa.
IGitLab kungenzeka iyindlela eheha kakhulu kimi ngemuva kweBitBucket. Ukuhluka kwayo kuyindlela yokulanda ipulatifomu yayo I-OpenSource ukuyifaka kuseva yethu.
Ku-GitLab singakha amaphrojekthi angaphezu kwe-100000, Amaqembu ancike kwizinqolobane eziningana futhi ngenxa yesixhumi esibonakalayo nokubukeka kwaso yiso esifana kakhulu neGitHub. IGitLab ifaka ukuphathwa kokugcinwa kwe-git, ukubuyekezwa kwamakhodi, ukulandelela umkhondo, i-wiki, nokunye okuningi.
Ivumela, kunjalo, ukwenza umsebenzi wokubambisana, ukubona ukusebenza kwamanye amaphrojekthi noma abantu, futhi ihlangana namathuluzi amaningi afana ne-Slack, HipChat, LDAP, JIRA, Jenkins, izinhlobo eziningi ze izingwegwe (izingwegwe) ne-API ephelele. Yize inengxenye yomphakathi wayo, kunjalo futhi inikela ngezinhlelo ezahlukahlukene zezinkampani.
Akukho okuningi ongakusho ngale nsizakalo, ingomunye womakadebona kakhulu yize ezikhathini zakamuva ibibandakanyeke ezindabeni ezithile ezinempikiswano ngenxa yendlela abasebenzisa ngayo ukwenza imali ebizwa nge-DevShare, uhlelo lokwenza imali nge-software ngokufaka i-adware ( adware) kwizifaki zamaphrojekthi aphethwe akhetha ukubamba iqhaza kuhlelo.
Okunye okungadingi kungeniswa emhlabeni we-GNU / Linux, kepha lokho ngokungafani nokunye, kusetshenziswa kakhulu ukusingatha amaphrojekthi weSoftware. Ithuthukiswa futhi inakekelwa yiCanonical Ltd.
Iqukethe izingxenye eziningana:
Ikhodi: isizinda sokubamba ikhodi yomthombo esisebenzisa uhlelo lokulawula uhlobo lweBazaar.
Iziphazamisi: uhlelo lokulandela umkhondo wesiphazamisi ukubika izimbungulu ngokusatshalaliswa okuhlukile nemikhiqizo.
Amapulani: uhlelo lokulandela umkhondo lokucaciswa nezici ezintsha.
Translations: isayithi lokuhumusha izinhlelo zokusebenza ngezilimi eziningi.
Izimpendulo: indawo esiza umphakathi.
I-Soyuz: ithuluzi lokuphatha ingxenye encane yokugcinwa kokwabiwa. Ifaka uhlelo lokwakha, ukunakekelwa kwephakeji, nokushicilelwa kwefayela.
Enye yezinto ezimbi kakhulu iLaunchpad enayo kubasebenzisi abaningi ukuthi iyayisebenzisa Bazaar njengokulawulwa kwenguqulo.
Mhlawumbe eyodwa engadumile noma enhle kangako yi-GNU Savannah, okuyi-Wikipedia, iphrojekthi yeFree Software Foundation enikezela ngezinsizakalo ezivela ku-CVS, i-GNU arch, i-SVN, iGit, iMercurial, iBazaar, uhlu lwamakheli, ukusingathwa kwewebhu, ukusingathwa ukulandela ifayela nefayili. USavannah ugijimisa uSavane, osuselwe kusoftware efanayo esetshenziswa yingosi yeSourceForge.
Iwebhusayithi yaseSavannah ihlukaniswe izizinda ezimbili: savannah.gnu.org ye-software esemthethweni ye-GNU project, ne-savannah.nongnu.org yayo yonke isoftware yamahhala engeyona eyamaphrojekthi. Ngokungafani neSourceForge, iSavannah igxile ekusingatheni amaphrojekthi wesoftware akhululekile ngokuphelele, okungukuthi, mahhala wezinto ezingekho mahhala, njengeFlash; futhi ngenxa yalokhu kuqinile kakhulu kuzinqubomgomo zayo zokushicilela, ukuze kuqinisekiswe ukuthi kuphela isoftware yamahhala ebanjwayo.
Lapho kubhaliswa iphrojekthi, abahlanganyeli bephrojekthi kumele bacacise ukuthi iyiphi ilayisense yamahhala elisebenzisayo.
Njengoba ukwazi ukubona, sinemisebenzi engaphezu kweyodwa lapho singasebenzisa khona amaphrojekthi ethu sidlala ngamathuba emali ngayinye. Ukuvalwa kweGoogle Code kungishaye njengebhakede lamanzi abandayo (njengoba kwenzekile lapho bevala iGoogle Reader) futhi kungenzeka ukuthi ngenxa yalokhu, njengoba ezinye izindlela zensizakalo ziqala ukuvela.
Uma ungibuza, ukukhetha okuhle kakhulu kuphakathi kweBitbucket neGitlab, ikakhulukazi eyokugcina ngoba singathenga kalula iVPS futhi sizisethele eyethu ingosi yokulawula inguqulo. Ukuzikhethela kungokwakho 😉
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » Ikhodi yakwaGoogle ifile, iziphi ezinye izindlela ezingcono kakhulu?
Ihlazo kulabo ababenamaphrojekthi kuGoogle Code, anginandaba, ngangijwayele iphosta eyisicefe engu-403. Lokho kuyiphutha. Iklayenti lakho alinayo imvume yokuthola i-URL, kokunye okushicilela engikusebenzisa kakhulu yiGitHub neBitbucket ngaphezulu kweGithub kunenye indlela, manje ngiyangabaza ukuthi iGoogle ayikaze iveze enye indlela abanayo umkhono? ??.
I-Google isebenzise kuphela isoftware yamahhala njengesikrini, kepha manje njengoba ihlangabezane nezinhloso zayo, ayisayidingi.
Yize iGithub ingeyona ehamba phambili uma isetshenziswa kakhulu, ngicabanga lokho ngenxa yokugxila kwayo emphakathini.
Yi-Google Code, ngasendleleni.
Ngiyithanda kakhulu iBitBucket. Ine-interface enhle kakhulu nemibhalo emihle kakhulu. Ngisebenzise futhi iGitlab, ngiyisebenzisa emsebenzini wami futhi ngiyayincoma. Angikaze ngiqonde ukuthi kungani umuntu angafuna ukusebenzisa iGoogle Code.
Ngaleso sikhathi, ngangikhetha i-Google Code ngoba isikhombimsebenzisi sasilula, silula kakhulu ... kwakuyizinto ezilula zeGoogle ... uma kuqhathaniswa neSourceForge, ngaleso sikhathi futhi manje eyiwebhusayithi enezinto eziningi futhi egcwele ngokweqile ngezinto.
Kukhona eyodwa ebizwa ngeGitLab futhi isiqubulo sayo sithi "Ingcono kuneGitHub" ngezizathu ezahlukahlukene, njenge:
- Ungakha i-repo yangasese.
- Ukusetshenziswa okukodwa kuphaneli yokulawula repo
Sekuvele kushiwo eposini.
Ngokombono wami othobekile okuwukuphela kwento ongayikhetha nayiyo …… ..lokho kunjalo, Madoda: GITHUB
NGENXA yokuthi NGIYAYITHANDA !!!
Vele badinga ukusho, ukuthi bavala ikhodi yeGoogle ngokuthanda iGoogle +
Ngisebenzisa i-gitlab yasendaweni futhi iyangifanela, okuthile komthengi ngoba kwenziwa ngezinqubo zeRuby ne-Unicorn kudla i-RAM ne-CPU kepha angikwazi ukukhononda, nginomkhiqizo wezinga le-github obanjwe ku-LAN yami.
Angiyithandi iBitbucket ngoba yiprojekthi ye-Atlassian yokuzilibazisa futhi ikhombisa ukuthi abayinaki kangako, ngakolunye uhlangothi, iGithub neGitlab bayizimbangi zezinkampani zabo.
USavanne ovela kuphrojekthi ye-GNU futhi unabathuthukisi abazinikele.
Ukuhlanganiswa okuhle kwezinye izindlela, kepha kuthiwani nge-codeplex?
IGitLab noSavanne babukeka njengezinketho ezinhle kakhulu kimi. Kepha iGoogle Code ingizwela kakhulu, ngoba isanda kuphuma amaphrojekthi amaningi athakazelisayo anjenge-64-bit port ye NSIS.
Khetha, kopisha futhi unamathisele umbhalo ku-nano, isihleli sombhalo esigungwini
UBetty: USiri noma umsizi wesitayela se-Google Now esigungwini se-Linux